Mareykanka oo cunaqabateyn saaray shirkad ay leeyihiin taliska Military ee Burma
Tani waa faallo ka tarjameysa aragtida Dowladda Mareykanka.
Taliska millatariga ee Burma ayaa diiday inuu soo celiyo dariiqii dimoqraadiyadda, taasi baddalkeedana wuxuu sii wadaa inuu bartilmaameedsado, weeraro ama dilo dibadbaxayaasha sida nabadda ah ugu mudaaharaadaya waddooyinka.
Waxaa intaasi sii dheer in si aanan kala sooc laheyn ay ciidamadu u weeraraan dadka jidadka iska socda. Taasi waxaa tusaale u ah, dhacdadi ay 27-ki March ciidamada si wuxushnimo ugu laayeen in ka badan 100 qof. Ciidamada waxay dileen in ka badan 600 oo ruux oo ay ku jireen tobnaan carruur ah.
Si ay uga jawaabto ficilladaasi gurracan, Dowladda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay Shirkadda Myanma Gems Enterprise, oo ah shirkad ay leedahay dowladda. Taasi waxaa lagu fuliyay digreetada tirsigeedu yahay 14014. Rajiimka Millatariga Burma ayaa hey’addaasi iyo kuwo kale oo soo saara gaaska dabiiciga ah uga faa’ideysanayay danahooda gaarka ah si ay uga taajiraan. Cunaqabateyntaasi waxaa lala beegsaday taliska milatariga ee ma ahan mid la saaray shacabka Burma.
Ficilkaan wuxuu tooshka ku daarayaa sida ay Waaxda Maaliyadda uga go’antahay in ay u diiddo rajiimka macangagga ah ee millatariga inuu ilo dhaqaale kaga macaasho shirkadaha ay dowladda leedahay ee guud ahaan Burma,” sidaasi waxaa yiri Andrea Gacki, oo ah agaasimaha xafiiska koontaroola hantida dibadda ee Dowladda Mareykanka.
“Dowladda Mareykanka kama daali doonto waana sii wadi doontaa taageeridda soo celinta nidaamka dimoqraadiyadda ee Burma iyo in lala xisaabtamo kuwa ka danbeeya fowdada halkaasi ka taagan, iyada oo la kaashaneysa saaxibaddeeda gobolka iyo kuwa caalamka.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka, Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku yir: “Waxaanu direynaa farriin cad taasoo ku socota millatari ay dowladda Mareykanka si kusii kordhineyso cadaadis xagga dhaqaalaha ah ilaa laga joojinayo qalalaasaha, laga sii deynayo dhammaan sida caddaalad darrada ah loo xiray, la qaadayo sharciga xaaladda deg degga guud ahaan waddanka Burma, la qaadayo xayiraadda dhanka isgaarsiinta isla markaana dib looga soo celinayo dimoqraadiyaddii Burma.
Dowladda Mareykanka iyada oo si dhaw ula shaqeyneysa xulufada iyo saaxibada guud ahaan gobolka iyo caalamka, ayaa waxay si adag baaqi ugu sii ahaan doontaa, dadaalladeeda joogtada ah ee ay ku cadaadineyso in millatariga ay ku joojiyaan dilka iyo qalalaasaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha sida nabadda ah u mudaaharaadaya, kuwaas oo taageersan soo celinta dimoqraadiyadda Burma. Waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa sidii aan caddaalada u horkeeni laheyn kuwa afganbiga iyo dilalka wuxushnimada ah u geystay shacabka Burma.